तपाईंको यात्राहरूमा बचत गर्नुहोस् - Coronavirus पछि यात्राका लागि सुझावहरू यात्रा समाचार
छुट्टिहरु आउँदैछन्! कोर्नोभायरस पछि तपाईंको यात्राहरूमा बचत गर्न सल्लाहहरू
सुसाना Godoy | | सुझावहरू
हामीले एक कदम अगाडी लिएका छौँ र, कोरोनाभाइरसको कारण सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संकटको अनुभव पछि हामी ब्रेक पाउन योग्य छौं। अवश्य पनि, हामी आफैंमा बचत बचत गर्न चाहँदैनौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी एउटा श्रृंखलाको प्रस्ताव गर्छौं तपाईंको यात्रामा बचत गर्न सल्लाहहरू, कि तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न।
किनकि हामीलाई थाहा छ कि यी महिनाहरू पछि पॉकेटहरू अत्यन्तै छोइए। यो सही पल हो हाम्रो बेल्ट कस गर्न तर बिदा लिन छैन छुट्टियाँ। हामी चरणहरूको शृ follow्खला अनुसरण गर्न सक्दछौं र हामी हेर्नेछौं कि यो कसरी रमाइलो गर्न सकिन्छ तर धेरै खर्च नगरी कसरी सकिन्छ। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ?
1 तपाईंको यात्राहरूमा कसरी बचत गर्ने: नजिकैका गन्तव्यहरू छनौट गर्नुहोस्
2 ग्रामीण पर्यटन, तपाईंको छुट्टीको लागि एक उत्तम विचार
3 एक कार्ड जसले तपाइँलाई सोच्दछ भन्दा बढी बचत गर्न मद्दत गर्दछ
4 संग्रहालय र नि: शुल्क गतिविधिहरूको छनौट गर्नुहोस्
5 एक मोटरहोम भाँडामा लिनुहोस्
6 अग्रिम बुक गर्नुहोस्
तपाईंको यात्राहरूमा कसरी बचत गर्ने: नजिकैका गन्तव्यहरू छनौट गर्नुहोस्
निकटता बचत गर्न को लागी एक तरीका हो तपाइँको यात्रा मा र एकै समयमा, यसको आवश्यक सबैलाई मद्दत गर्न। त्यसकारण, अगाडि बढ्नुको सट्टा, हामी घरको नजिकमा शर्त लगाउँछौं। तपाई जुनसुकै देशबाट आएका हुनुहोला, त्यहाँ पक्कै त्यहाँ केहि ठाउँ हुनेछ जुन तपाईले अहिलेसम्म भ्रमण गर्नुभएको छैन। खैर, यो आफैलाई लुकाउन सबै भन्दा राम्रो समय हो! अर्थतन्त्रलाई पुन: सुरूवात गर्ने एउटा तरिका र यसमा तपाईले प्रस्तावहरू र विकल्पहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ भन्दा सस्तो हुन्छ। दुबै पहाड र समुद्र तट क्षेत्र तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि पर्खिरहेका छन्। के तपाईं उनीहरूलाई उम्कन दिनुहुन्छ?
ग्रामीण पर्यटन, तपाईंको छुट्टीको लागि एक उत्तम विचार
भीडबाट टाढा, यो हामीले प्रेम गर्ने विचारहरूको अर्को हो। यसका अतिरिक्त हामी यस क्षेत्रमा व्यापक प्रस्तावहरू पनि फेला पार्दछौं। एक सेक्टर जुन पहिले नै यसको फायर भइरहेको छ जुलाई को महिना को लागी आरक्षण। सायद यस बचतमा हाइलाइट गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा यो हो कि तपाईं आफ्नै गाडीमा आउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि हामी विमानको टिकटमा खर्च गर्नबाट पनि जोगिन्छौं। एक पटक तपाईंको गन्तव्यमा, तपाईंसँग प्रकृतिसँग सम्पर्कमा रहन, पैदल यात्रा गर्न वा विशिष्ट आउटडोर खेलहरूको अभ्यास गर्न विकल्प हुनेछ। पक्कै पनि एक स्ट्रिम पनि तपाईंलाई राम्रो डुब्नको लागि पर्खिरहेको छ।
एक कार्ड जसले तपाइँलाई सोच्दछ भन्दा बढी बचत गर्न मद्दत गर्दछ
हामीले गन्तव्यहरू र यसको लागि व्यावहारिक विकल्पहरूको बारेमा कुरा गरेका छौं कोरोनाभाइरस पछि यात्रा। त्यसोभए, ती मध्ये हामी एउटा आधारभूत सहायक बिर्सन सक्दैनौं। यो के हो? Bnext कार्ड बाट। एक कार्ड जसले तपाइँलाई तपाइँको सबै भन्दा राम्रो बिदाको योजना बनाउँदा बचत गर्न मद्दत गर्दछ, यदि तपाईं स्पेनबाट हुनहुन्छ भने Bnext कार्ड पाउनुहोस् पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र। एकातिर, यो भन्नु छ कि यसले तपाईलाई अन्य मुद्रामा भुक्तान गर्न वा एटीएमबाट पैसा निकाल्न पनि कमिसन चार्ज गर्दैन।
यो एक कार्ड र नि: शुल्क नि: शुल्क खाता हो भन्ने तथ्य बाहेक, तपाईं ती करहरू भुक्तान गर्न बिर्सनुहुनेछ बैंकहरूको विशाल बहुमतले गरेको छ। Bnext को साथ तपाईं कुनै पनि एटीएमबाट स्पेन र विदेश दुबै पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। तर यो यो छ कि थप, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ पैसा पठाउनुहोस् वा अनुरोध गर्नुहोस् यस कार्ड मार्फत, फेरि नि: शुल्क।
यदि तपाईं मेक्सिकोबाट हुनुहुन्छ भने, तिमि लइजाऊ १०० pesos नि: शुल्क जब भाडामा Bnext कार्ड , जसले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको अनलाइन खरीदसँग मद्दत गर्दछ (तपाईंसँग तपाईंको भुक्तानलाई अझ सुरक्षित बनाउन भर्चुअल कार्ड उपलब्ध छ) वा अन्य दैनिक भुक्तानहरू, राम्रो चुटकी बचत गर्नका लागि (तपाईंको शारीरिक कार्डसँग जुन टेक्नोलोजी सम्पर्कविहीन पनि छ)। कमिसनहरूमा बचतको साथसाथै तपाइँ तपाइँको मनपर्दो ब्रान्डहरू जस्तै Spotify, Apple Store मा भुक्तानी गर्न Bnext प्रयोगको लागि मात्र क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ ...
संग्रहालय र नि: शुल्क गतिविधिहरूको छनौट गर्नुहोस्
निश्चित रूपमा तपाईको छनौट गरिएको गन्तव्यमा पनि त्यहाँ हुनेछ हेर्न ठाउँहरू, ती नि: शुल्क छन्। केहि संग्रहालयहरु का हप्तामा एक दिन नि: शुल्क टिकट छ जस्तै आइतवार, एक विकल्प जुन हामी पनि लिन सक्दछौं। अन्य क्षेत्रमा तपाईसँग समूह वा परिवारका लागि निःशुल्क वा कम मूल्यका लागि गतिविधिहरू पनि हुन्छन्। यति मात्र कुरा के छ भने केहि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने कुरा जुन हामी भ्रमण गइरहेका छौं र निश्चय पनि, कि हामीले विचार गर्न धेरै आकर्षक विकल्पहरू भेट्टाउनेछौं।
एक मोटरहोम भाँडामा लिनुहोस्
यदि तपाईं घर भित्र हुनुको बारेमा धेरै जान्न चाहनुहुन्न भने, यो यात्राको लागि अर्को अवधारणा हो। किनकि हामीले उल्लेख गरेका छौं कि हामी नजिकैका गन्तव्यहरू चाहान्छौं, यसले चोट पुर्‍याउँदैन गाडी संग वा टोउ मा हाम्रो घर संग आइपुग्नुहोस्। सबै यात्रुहरूको लागि जोसँग एक हो, बधाई छ र जो छैन, को लागि भाडा सधैं रहनेछ। यो सँधै हामीले छनौट गरिएको मोडेलमा निर्भर गर्दछ तर मूल्यहरू १०० यूरोबाट सुरु हुन सक्दछ। यो दिमागमा हुनुपर्दछ कि यसमा हामीसँग बिस्तारै चाहिने सबै थोक हुनेछ, आराम गर्न र खान सक्षम हुन दुबै। यो पनि याद गर्नुहोस् कि यी सबै खरीदहरूको लागि तपाईसँग Bnext कार्ड छ, जुन सँधै सहयोगी हुन्छ।
यो सत्य हो कि केहि दिन अघि हामीले त्यो कदम चाल्न सकेनौं। तर अब जब हामी जान्दछौं कि कसरी सबै विकसित भइरहेको छ, यो आरक्षण गर्ने समय हो। त्यसोभए यसले चोट पुर्याउँदैन कि हामी विकल्पहरू सुव्यवस्थित र छिटो निर्णय। राम्रो समय हो प्रस्तावहरू खोज्नुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यो ठाउँ सुनिश्चित गर्न जुन हामीलाई त्यो राम्रो हकदार आराम लिन मद्दत गर्दछ, यो जुलाई, अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा होस्। के हामी हाम्रो झोला पैक गर्दैछौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » छुट्टिहरु आउँदैछन्! कोर्नोभायरस पछि तपाईंको यात्राहरूमा बचत गर्न सल्लाहहरू
बाथ, एक धेरै बेलायती गन्तव्य
कातालोनियामा पानी पार्क